बीजेपी निकट विद्यार्थी संगठनको दवाबपछि अरुन्धती रोयको किताब पाठ्यक्रमबाट हटाइयो | Nagarik News - Nepal Republic Media
अरुन्धती रोयको किताब 'वाकिंग विद द कमरेड्स' एमए अंग्रेजीको सिलेबसमा सन् २०१७ देखि राखिएको थियो। भारतीय माओवादीसँग उनीहरुको क्षेत्रमा अरुन्धतीको भेटघाटबारे यो कितावमा लेखिएको छ।
पछिल्लो हप्ता एबीवीपीका सदस्यले विश्वविद्यालयका कुलपति डा. पिचुमणिसँग भेटेर पाठ्यक्रमबाट किताबलाई हटाउन माग गरेका थिए। कुलपतिलाई उनीहरुले दिएको पत्रमा भनिएको छ, 'वितेका तीन वर्षदेखि पाठ्यक्रममा यो पुस्तक राखिनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसको परिणामस्वरुप नक्सल र माओवादी विचारधाराको सिधा प्रभाव विद्यार्थीमा पर्छ। एबीवीपीले राष्ट्र विरोधी किताबलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएकोमा विरोध गर्छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले यसको लागि माफी माग्दै तुरुन्त पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्छ।'
उक्त किताबको ठाउँमा एम. कृष्णनको 'माइ नेटिव ल्यान्ड: एसेज अन नेचर' लाई समावेश गरिएको छ।
बीजेपीले पाठ्यक्रमबाट रोयको किताब हटाएकोमा स्वागत गरेको छ भने डीएमके र सीपीइमले यसको विरोध गरेका छन्।
अरुन्धती भारतकी चर्चित लेखिका हुन्। उनले बुकर पुरस्कारसमेत जितेकी छन्। उनी सन् २०१० मा माओवादी प्रभावित मध्य भारतीय क्षेत्र पुगेकी थिइन्। त्यहाँबाट फर्केपछि रोयले 'वाकिङ विद द कमरेड्स' लेखिकी थिइन्।
उनले यस किताबमा माओवादीको अनुभव समेटेकी थिइन् र किन हतियार उठाउन बाध्य छन् भन्ने विन्दु खोजेकी थिइन्। पुस्तक सन् २०११ मा प्रकाशित भएको थियो।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ १३:४९ शुक्रबार
अरुन्धती रोय पाठ्यक्रम